Posted by pandora at 4:30 PM
i like this poem since when i saw u post it on yadanar.. :)
လေးထောင့် အလုပ်ရုံက အပြန်
လေးထောင့် အခန်းကို ပြန်အရောက်
လေးထောင့် တံခါးကို ကသောကမျောဖွင့်
လေးထောင့် အိပ်ရာပေါ်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ်..။
:D လေးထောင့်ကဗျာကိုတွေ့တော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ သဘောကျလာလို့ မဟုတ်မဟပ်တွေ လျှောက်စပ်ကြည့်တာ.။ မူရင်းကို မမှီလို့ လေးထောင့် ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေ လေးထောင့် ကွန်မန့်. (အဲ.. ဟုတ်ပေါင်) ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာအသစ်၊ စာအသစ်တင်ပါအုံး။ ပန်ဒိုရာ တော်တော်အလုပ်များပုံ ပေါ်တယ်။ :)
ပန်ဒိုရာ... ကိုကလိုစေထူးဆိုဒ်က တွေ့ လို့ ၀င်လာကြည့်တာ ။ ကဗျာရေးတော်ပြီး ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်လည်းတော် ၊ ပုံဆွဲလည်းတော်ပဲး)
ဒီကဗျာလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ။ ပေါ့၂ပါး၂လေးနဲ့ လူတွေအားလုံးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ပုံစံကို ဖေါ်ပြထားတာ ။
ဒါလေးကိုကြိုက်လို့ မသွးပါတယ်. ပန်ဒိုရာ
ဒေါ်ပန်ပြောမှ အရာများများ လေးထောင့်
ငါစိတ်ဓါတ်ကော လေးထောင့်လားမသိ ?
ခု ကိုင်ထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်ကတော့ အဝိုင်း။ :D